July 21, 2019 puntlandnews 0
Puntlandnews.net (Laascaanood)-Xarunta gobolka Saraar ee magaalada Caynaba waxaa iminka ka bilaabmay mudaharaad culus oo ay dhigayaan qeybaha kala duwan ee bulshada ee markaasi ku dhaqan magaalada Caynaba. waxaana wararka ay helayso warbaahintu sheegayaan in uu […]
Ciidamada Dowladda Soomaaliya ayaa saakay waxaa ay dhaq dhaqaaqyo Ciidan ka wadaan tuulooyin hoostaga degmada Garbahaareey ee Gobolka Gedo,halkaas oo shalay Gelinkii dambe ay madaafiic isku weydaarsadeen Ciidamada Dowladda & Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa weerar madaafiic […]
DAAWO-Puntland wadahadalka Somaliland uma matali karaan dad khilaafka qayb ka ahaa.
Madaxweynaha Puntland ayaa shaaca ka qaaday in Puntland ay tahay cidda waxa ugu badan ka dhexeeyaan Somaliland aysanna wadda hadalka kumatali karin shaqsiyaad khilaafka qayb ka ahaa. DAAWO
MUUQAAL-Madaxweynaha Puntland oo si kulul uga hadlay kuwa Xamar lacagta kaga qaata burburinta Puntland & shaqsiyaad xiran.
July 20, 2019 puntlandnews 0
Puntlandnews.net (Garoowe)-Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Denni ayaa waxa uu si kulul ula hadlay shaqsiyaad iyo siyaasiyiin muddooyinkii ugu dambeeyey ku howlanaa burburinta iyo waxyeelaynta dowladda iyo dadka Puntland. Siciid Cabdullaahi Denni ayaa sheegay inay […]
DEG DEG+DAAWO: Puntland oo jawaab la yaab leh huwisay Farmaajo
Puntland ayaa si adag uga jawaabtay warar ka soo baxay Madaxtooyada Soomaaliya oo lagu eedeeyey Puntland in ay xirxirtay muwaadiniin Soomaaliyeed oo ka shaqeynayay arrimaha horumarinta bulshada, waxaana muuqatay in ay siyaasadeysay dawladda Soomaaliya. HALKAN […]
Sawirro-Masaajid la dhisay 1,200 sano kahor oo lagu arkay dalka Israa’iil.
July 20, 2019 puntlandnews 1
Khubarada ku takhasusutay baaritaanka haraagga Qaddiimiga ee Israel waxay Khamiistii la soo dhaafay sheegeen inay heleen Haraaga dhismo Masjid aan caadi ahayn oo la dhisay 1,200 sanno ka hor. Masjidkaasi ayaa la sheegay in laga […]
DAAWO-Taliyayaal iyo guddoomiyeyaal Somaliland soo dirtay oo Badhan shir jaraa’id ku qabtay.
Puntlandnews.net (Badhan)-Masuuliyiinta maamulka degmada Badhan ugu magacaaban Somaliland ayaa waxa ay ka hadleen xaaladda degmada iyagoona sheegay in ay gacanta ku hayaan degmadaasi guud ahaan xilli Puntland ay ka arriminayso. Guddoomiye ku-xigeenka Badhan ugu magacaaban […]
DEG DEG+DAAWO: Mooshinka Baarlamaanka Puntland oo la xariira Kiiskii Caasho Ilyaas Aden
Xildhibaano katirsan baarlamaanka Puntland ayaa gudbiyey mooshin ka dhan ah Guddiga Garsoorka ama Maxkamadda Sare ee Puntland, oo ay ku eedeyeen in aysan sifo sharci ah u marin arrimaha Garsoorka ee Puntland, waxaana hadda maxkamadda […]
TOP NEWS-Farmaajo iyo Denni oo kawada hadlay xallinta khilaafka DFS & Puntland miyaa laga qanciyey tabashada PL.
Puntlandnews.net (Garoowe)-War qoraal ah oo lagu daabacay barta facebook ay kuleedahay madaxtooyada Soomaaliya ee Villa Somalia ayaa lagu shaaciyey xog ku saabsan wada hadal khadka Telefanka ah oo dhexmaray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo […]
DAAWO-Reer Qardho oo la saftay madaxweyne Denni ugana digey madaxda Soomaaliya faragelinta Puntland.
DEG DEG-Wadaad lagu xiray Boosaaso iyo taliska ciidanka Puntland oo digniin kama dambays ah diray.
WARAYSI-Qoondadii xajka ee Puntland oo la iibsadey, sida markii hore loo qaybiyey & cidda gadatay.